Ny hatsaram-panahin'ny vahiny - Church of God Switzerland of the World
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny sitrapon'ireo vahiny
"Asehoy ahy sy ny firenena itoeranareo ho vahiny izao ny soa nasehoko anao" (1. Mosesy 21,23).
Ahoana no tokony hifampiraharahan’ny firenena iray amin’ireo vahiny ao aminy? Ary ny tena zava-dehibe, ahoana no tokony fitondran-tenantsika rehefa vahiny any an-tany hafa? ny 1. Ao amin’ny Mosesy 21 Abrahama nonina tany Gerara. Toa tsara fitondran-tena izy, na dia teo aza ny fitaka nataon’i Abrahama tamin’i Abimeleka, mpanjakan’i Gerara. Efa nolazain’i Abrahama taminy ny tsy marina momba an’i Saraha vadiny mba hiarovana ny tenany amin’ny famonoana ny tenany. Saika nijangajanga tamin’i Sara àry i Abimeleka. Tsy namaly ratsy ny ratsy anefa i Abimeleka, fa naveriny taminy kosa i Saraha, vadin’i Abrahama. Ary hoy Abimeleka: Indro, eo anoloanao ny taniko; mipetraha amin'izay tsara eo imasonao!" 1. Tamin’izany fomba izany no nanomezan’i Abrahama lalana malalaka manerana ny fanjakana. Nomeny sekely volafotsy arivo koa izy (andininy 20,15).
Ahoana no navalin’i Abrahama? Nivavaka ho an’ny fianakavian’i Abimeleka sy ny ankohonan’i Abimeleka izy mba hanesorana azy ireo ny ozona momba ny tsy fahampian-tsakafo. Mbola niahiahy ihany anefa i Abimeleka. Angamba noheveriny ho hery tokony hoheverina i Abrahama. Nampahatsiahivin’i Abimeleka an’i Abrahama àry ny fomba nitondrany azy sy ny vahoakany tamim-pahasoavana. Nanao fanekem-pihavanana izy roa lahy, te hiara-hiaina eto an-tanindrazana tsy misy herisetra na fifandrafiana. Nampanantena i Abrahama fa tsy hanao hosoka intsony. 1. Mosesy 21,23 ary maneho fankasitrahana noho ny fanaovan-tsoa.
Tatỳ aoriana, hoy i Jesosy ao amin’ny Lioka 6,31 "Ary araka izay tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy koa!" Izany no hevitry ny teny nolazain’i Abimeleka tamin’i Abrahama. Izao no lesona ho antsika rehetra: Tokony ho tsara fanahy sy hifampiantra isika, na olon-tsotra na vahiny.
Ry ray malala, miangavy anao hanampy anay hifankatia hatrany amin'ny alàlan'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Amen!